ओलम्पिकको स्वर्णिम सपना ! - Makalukhabar.com
ओलम्पिकको स्वर्णिम सपना !
मकालु खबर	 शनिबार, चैत २१, २०७७ १३:४२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ‘म भोलिपर्सि ओलम्पिकमा भाग लिन्छु अनि नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाउँछु ।’ ७ वर्षीय राउल चौधरीको यो वाक्यांशमा उनको दृढ विश्वास मिसिएको छ । उनको स्वर्णिम सपना पनि यहीँ झल्किन्छ । सेन्ट जेभियर्स स्कूलमा कक्षा २ मा अध्ययनरत राउललाई बन्नु छ एउटा राम्रो साइक्लिस्ट अनि दिलाउनु छ नेपाललाई पदक ।
राउललाई बुबा लक्ष्मीप्रसाद चौधरीले दुःख गरेरै भए पनि काठमाडौंको नाम चलेकै स्कूलमा पढाएका छन् । लक्ष्मीप्रसाद सुनाउँछन्– छोरोलाई पहिल्यैदेखि राम्रै स्कूल पढाउने सोच थियो । तर, त्यहाँ पढ्नको लागि इन्ट्रान्स पास गर्छ कि गर्दैन भन्ने थियो । अन्नतः सेन्ट जेभियर्समा नाम निकाल्यो अनि त्यहीँ पढ्यो ।’
‘म भोलिपर्सि ओलम्पिकमा भाग लिन्छु अनि नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाउँछु ।’
राउल चौधरी साइक्लिस्ट
तर राउलको इच्छा भने खाली औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नु मात्रै होइन, उनको पहिलो इच्छा नै ‘साइक्लिङ’ हो । त्यसो त गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी लक्ष्मीप्रसादले जसोतसो घर खर्च मात्रै धानिरहेका छैनन्, राउलको खुसी पनि किनेकै छन् ।
राउलको बारेमा कुरा गर्दा लक्ष्मीप्रसादको मुहारमा छुट्टै किसिमको सन्तुष्टि झल्कन्छ । त्यसको कारण हो, राउलको आनिबानी र उनको रुची । राउल शान्त स्वभावका छन्, त्यसैले त अन्य बालबालिकाभन्दा फरक पनि छन् । राउलको सबैभन्दा रुचीको काम नै साइक्लिङ गर्नु हो । लक्ष्मीप्रसादले आफ्ना साथीका छोराछोरी, छिमेकीको बच्चाहरुको बारेमा बेलाबेलामा गुनासो सुनिरहन्थे । बच्चाले मोबाइल मात्रै हेर्न खोज्छ, कम्प्युटरमा गेम मात्र खेल्न खोज्छ, सामाजिक छैन । मान्छेहरुसँग घुलमिल नै हुँदैन, यस्तै यस्तै… । तर, लक्ष्मीप्रसादसँग छोरो राउलको मानेमा त्यति धेरै गुनासो छैन । कारण हो, कमसेकम राउलको सानैदेखि ठूलो सपना छ ।
लक्ष्मीप्रसादलाई ‘मेरो छोरो पनि अरुको बालबच्चाजस्तै पो बन्छ कि ?’ भन्ने पिरले नपिरोलेको पनि होइन । तर, राउलको अहिलेको स्कूलिङसँग लक्ष्मीप्रसाद खुसी छन् । किनकी, लक्ष्मीप्रसाद आफैँ पनि साइकलका पारखी हुन् ।
लक्ष्मीप्रसादको घर तराइको सप्तरी जिल्लामा पर्छ । उनी बच्चा बेलादेखि नै साइकल चलाएर हुर्किए । साइकलमै घाँस दाउरा गरे । साइकलमै विद्यालय गए । लक्ष्मीप्रसादले साइकलको महत्व बुझेरै छोरालाई उपहार दिए ‘साइकल’ ।
जतिबेला राउल हिँड्न अनि बोल्न सक्दैनथे– त्यतिबेला नै उनको हातमा साइकल परिसकेको थियो । राहुलले साइकलकै सहायताले उभिन सिके । साइकल समाएरै हिँड्न सिके । उनले चारपाङ्ग्रे साइकलको आडमा हिँड्न सिके । तर हिँड्न र बोल्न सक्ने हुनेबित्तिकै राउलले आफूसँग भएको साइकलको ४ वटा पाङ्ग्रामध्ये सहायक दुई पाङ्ग्रा निकाल्न भने । त्यतिबेला राउल तीन वर्षका मात्रै थिए । अहिले त राउलसँग राइडिङ गर्ने राम्रो तीन वटा साइकल छ । त्यसमध्ये एउटा चाहिँ उनलाई साइक्लिस्टले नै उपहार दिएका हुन् । बाँकी दुई वटा लक्ष्मीप्रसादले किनिदिएका ।
राउल साढे तीन वर्षको हुँदादेखि नै राम्रोसँग साइकल चलाउन सक्थे । राउललाई सुरुमा उनकै बुबाले प्रशिक्षण गराए । राउल ५ वर्ष पुगेपछि काठमाडौंको सडकमा लक्ष्मीप्रसाद आफैँले राउललाई सङ्गै लिएर हिँड्थे ।
राउलकी आमा रेखाकुमारी चौधरी घरगृहस्थी सम्हाल्छिन् । उनलाई भने आफ्नो सानो छोरालाई बुबाले सडकमा साइकल कुदाउन लगाएको पटक्कै मन पर्दैन । लक्ष्मीप्रसाद सुनाउँछन्, ‘छोरालाई साइकल दियो अनि आफू पनि साइकलमै हिँड्यो भनेर घरमा दिनकै झगडा पर्छ श्रीमतीसँग ।’
यद्यपि, रेखाको त्यो असन्तुष्टि जायज भएको मान्छन् लक्ष्मीप्रसाद । ‘काठमाडौंमा हिँड्ने र साइकल चढ्नेलाई मान्छे गन्दैनन् । राम्रा र पक्की सडक त छन्, तर साइकल चलाउने लेन छैन । साइकल चढ्ने वातावरण नै छैन । गाडी र मोटरसाइकलले पेल्छ । दुर्घटनाको सम्भावना धेरै छ, निकै जोगिएर चलाउनुपर्छ । कुपनडोलदेखि जावलाखेल हुँदै मंगलबजारसम्मको ४.७ किलोमिटर साइकल लेन पनि नाम मात्रको साइकल लेन हो । न त्यो मापदण्डअनुसारको छ न त्यहाँ साइकल मात्र गुड्छ । साइकल लेन त मोटरसाइकल पार्किङ्ग पो भएको छ । माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मको ३.१ किलोमिटर साइकल लेनको हालत पनि उस्तै छ । साइकल यात्री त सुरक्षित छैनन् नै, साइकल झन् असुरक्षित छ । लक गरेको साइकल ताल्चा नै काटेर चोरिदिन्छन् । साइकल पार्किङगको सुविधा छैन । त्यही भएर बुढी डराउँछे कतै दुर्घटना पो हुने हो कि भनेर ।’
लक्ष्मीप्रसाद आफ्नी श्रीमतीलाई बुझाउने प्रयास गर्छन्, ‘समाज विकृतितिर उन्मुख छ । बालबालिकाहरु सानै उमेरमा सामाजिक सञ्जाल र लागूपदार्थ दूर्व्यसनीमा फस्छन् । साइकल यस्तो राम्रो लत हो, जुन चलाउने बानी लागेपछि अरु कुलतमा फस्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले छोराको साइकलप्रतिको झुकावले उसलाई सही बाटोमा लानेछ । स्वस्थ हुन त साइकलले झन् ठूलो भूमिका खेल्छ । साइकल वातावरणमैत्री हुन्छ । यसले कुनै प्रदूषण गराउँदैन ।’
सानै उमेरका राउललाई पढाइसँगै साइक्लिस्ट बन्ने सपना पूरा गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । तर राउल मेहनत गरेर लागिपरेका छन् । साइकलबाटै राउलले काठमाडौंको धेरै डाँडा घुमिसकेका छन् । ककनी, बतासे डाँडा, सेतो गुम्बा, तारेभीर, मुड्खु भञ्ज्याङ, कोतडाँडा जस्तो जङ्गलको कठिन रुटमा पनि राउलले साइकलमा राइड गरिसकेका छन् ।
उनी समाज सेवाको लागि कोष संकलन गर्न धेरै साइकल र्यालीमा सहभागी भइसकेका छन् । उनी ओलम्पिक दिवस, महिनावारी सरसफाइ दिवस, हेरिटेज साइकल र्याली जस्ता साइकल र्यालीमा निरन्तर सहभागी भइरहेका छन् । ‘रन फर चिल्ड्रेन रन टुगेदर’ को केटीएम सिरिजमा राउलले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका थिए । गत महिनाको फागुन २७ गते विश्व वन्यजन्तु दिवसको अवसरमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५५ किलोमिटर क्रसकन्ट्री साइकलिङ्ग आयोजना गरिएको थियो । त्यसमा राउल पनि सहभागी भएका थिए । जङ्गलको रुटमा भएको उक्त राइडिङमा बाघ भालुजस्ता खतरनाक जङ्गली जनावरसमेत भेटिन्थ्यो । तर त्यही राइडिङमा पनि राउल ५५ किलोमिटर पार गर्नेको पहिलो समूहमा नै परे ।
लक्ष्मीप्रसादले खुसी व्यक्त गर्दै भने– ‘राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वनिर्देशक बाबुकृष्ण कार्कीले राउलले ५५ किलोमिटर क्रसकन्ट्री पार गरेर आएपछि तालीको गड्गडाहटसहित स्वागत गर्नुभयो । बाबुकृष्ण कार्कीले मेरो आधा महिनाको पेन्सन राउललाई भन्दै रु. १८ हजार नगद पुरस्कारसमेत दिनुभएको थियो । निकुञ्जले आयोजना गरेको उक्त साइकल राइडमा २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रु. ५१ हजार नगद पुरस्कारसहित राउललाई सम्मान गरे । हाम्रो खुसीको सीमा नै रहेन । हौसला बढ्यो ।’
राउलले अहिलेसम्म कुनै साइक्लिस्टबाट प्रशिक्षण नलिइ राइड गरिरहेका थिए । तर, अब भने राउलको साइकल यात्रालाई निखार्दै लैजाने र प्रतिस्पर्धामा पठाउने तयारी गर्दै छन् लक्ष्मीप्रसाद । राउललाई पेशागत साइकल राइडरमा हुनुपर्ने गुण, साइक्लिस्ट स्टन्ट अभ्यास र साइक्लिङ गर्न फलो गर्नुपर्ने डाइटबारे पढाउन नेपाल साइक्लिङ स्कूलमा भर्ना गरिदिएका छन् । हप्ताको एक दिन शनिवार राउल साइक्लिङ स्कूल जान्छन् । साइक्लिङ जान थालेपछि राउलको जाँगर दोब्बर भएको छ । अरु बेला बिहान स्कूल जान ढिला भयो भन्दै उठाउनुपर्ने राउललाई शनिवार कसैले उठाउनु पर्दैन । आफैँ उठेर साइक्लिङ सूटमा तयार भइहाल्छन् ।
एक महिनामा ४ दिन प्रशिक्षण हुन्छ । राउल साइक्लिङ गर्न प्रेरित गर्नको नाममा पदमेन्द्र कर्माचार्य, डाइमण्ड थापा, सुमन आचार्य, सुजित लामा, रविन थापा, कमला पुनलगायतका साइक्लिस्टको नाम छुटाउँदैनन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुले मलाई सधैं हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ ।’
लक्ष्मीप्रसादले छोरालाई राम्रो साइक्लिस्ट बनाउने सोचेका छन् । तर लक्ष्मीप्रसादको गुनासो छुट्टै छ । साइकल प्रशिक्षणदेखि राम्रो साइकल खरिद, मर्मत खर्च सबै नेपालमा महङ्गो छ । अनि फेरि साइक्लिङमा दीर्घकालीन भविष्य पनि छैन ।
लक्ष्मीप्रसादले उदाहरण दिँदै भने– ‘साग गेममा गोल्ड मेडल जित्नुभएको रोअन तामाङ अहिले यूएईमा हुनुहुन्छ । त्यस्ता कति च्याम्पियन छन् जसले नेपालमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन हुनुपरेको छ । न उहाँहरुलाई कसैले चिन्छ । न राज्यले नै केही व्यवस्था गर्छ ।’
सरकारले साइकल र साइक्लिस्टलाई प्राथमिकतामा नराखे पनि लक्ष्मीप्रसादले छोराको ओलम्पिक खेल्ने सपनालाई पूरा गर्ने अर्को सपना देखेका छन् ।
शनिबार अपराह्नपछि मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना